नबिल–एनबी बैंक मर्जर अगाडि बढ्ने, अदालतमा परेको रिट फिर्ता Bizshala -
काठमाण्डौ । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ।
नबिल र एनबी बैंकबीचको मर्जरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट फिर्ता भएसँगै यो प्रक्रियाले फेरि निरन्तरता पाउने भएको हो।
यसअघि सर्वोच्च परेको रिटमा एकल इजलासले तत्काल मर्जर अगाडि नबढाउन आदेश दिँदै दुवै पक्ष छलफलमा डोकेको थियो।
त्यसपछि यो मुद्दा संयुक्त इजलास पुगेको थियो। यो मुद्दाको पेस आज बिहीबारलाई तोकिएको थियो। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता मानन्धरको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भनिएको थियो। तर, सुनुवाइ सुरु नहुँदै रिट निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मर्जर प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने भएको हो।
दिवेश्वरी इन्भेस्टमेन्ट प्रालि र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले मर्जरविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नबिल बैंक, एनबी बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
नबिल र एनबी बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्ति स्वीकृति दिइसकेको छ। अन्तिम स्वीकृति लिनुअघि दुवै बैंकले विशेष साधारणसभा जेठ ७ गते (शनिबार) डाकेका छन्। सोही सभामार्फत यी दुवै बैंकले आपसमा मर्जरमा जाने प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्नेछन्।
नबिलले प्रतिकित्ता ४३ रुपैयाँका दरमा एनबी बैंकलाई प्राप्ति गर्न लागेको हो। मर्जरपछिको बैंक देशकै दोस्रो ठूलो पुँजी कोष भएको बैंक हुनेछ।
मर्जर प्रक्रिया टुंगिएपछि नबिल बैंककै नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ। जेठभित्र मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकको योजना छ।
merger nepal bangladesh bank limited Nabil Bank Limited
राष्ट्र बैंकद्वारा नबिल–एनबी बैंकबीचको मर्जरलाई अन्तिम
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश (एनबी)...
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई व्यक्तिगत रोजाइको डिजाइनमा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई उनीहरुको...
जेठ लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. २३ अर्बले बढ्यो,
काठमाण्डौ । जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २३ अर्ब...
बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर अचाक्ली बढ्यो, अधिकांशको १५% माथि
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले असार महिनामा लागू हुने कर्जा र...
वाणिज्य बैंकहरुबीच असारमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने
काठमाण्डौ । असार महिनामा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने...
इन्भेस्टमेन्ट–मेगा बैंकबीच मर्जर सम्झौता हुँदै, अनुमोदनका
काठमाण्डौ । पूर्वसहमतिमा कुनै अवरोध आएन भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट...
जेठ लागेयता रु. २० अर्बले बढ्यो वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप
काठमाण्डौ । जेठको तेस्रो साता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ...
जेठ लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. १३ अर्बले बढ्यो,
काठमाण्डौ । जेठ महिना लागेयता वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार...